Downloads 4 957
Kana uchida ichi kuwedzera-kwenguva FSX / P3D tinya pano
ndege ino ine uzere FS Animations. kupenyerera textures uye Virtual Cockpit nedzimwe tsika gauges. Inosanganisira RAF, Maltese, uye Swedish pendi zvirongwa zvakadaro, Swedish hwokuvhariridza kuva yayo SK-61 womuenzaniso.
The Scottish Aviation bulldog munhu British maviri-chigaro divi-ne-divi (pamwe Opsioneel chigaro wechitatu) Kudzidziswa ndege rikagadzirwa Beagle Aircraft sezvo B.125 bulldog.
The zvikabva bulldog wokutanga vakamhanyira 19 May 1969 pana Shoreham Airport. Wokutanga Kuti mhando chaiva 78 kubva Swedish Air Board. chero kugadzirwa ndege akanga asati avaka, Beagle Aircraft vakarega dzokutengeserana uye kugadzirwa kodzero nokuda ndege, pamwe Swedish murayiro, vakatorwa pamusoro ne Scottish Aviation (bulldog) Limited. ndege vose vaivapo vakanga rakavakwa Ashbury Airport kubudikidza Scottish Aviation, kana mumakore akazotevera, British Aerospace.